SomaliTalk.com » “Dagaalkii 77 ayaa la’iqabtay anigoo 13 jir ah” Q.1aad
Assalaamu Calaykum walaalaha qeymaha iyo qaayaha badan ee kuxiran websitekan ukhidmeeya shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaan fasax utagey magaalada Godey oo walaalkey ka shaqeynaayey.Walaalkey Muxammed xabsiga ayaan wada galnay, diintana waan soo wada galnay walow uu iiga soo horeeyey!Al-xamdulillaah,iminka waxaa nagu soo biirtey gabadh ay walaashey dhashey oo soo muslimtey ayadoo joogta Australia.Sheekh Abubakar wuxuu yiri isagoo kahadlaya sida ay kubilaabatey qisada 11sano oo xabsi ah:
Inuu dagaal kadhexeeyo labada wadan ee Somalia iyo Ethiopia waxaan kamaqlay aabahay oo igula soo dardaarmey inaan tagin xaduudaha iyo meelaha dagaalka kadhowyahay.Dhanka kale, waxaan baxsad ka ahaa ciidamada Ethiopia waayo waxaan kamid ahaa arday taageersaneyd mucaaradka dowlada oo wadooyinka ayaan ku qeybin jirney waraaqado. Wadanka Ethiopia waxaa ka jirtey markaas caburis xaga siyaasada ah oo qofkii lagu ogaadana inuu ka tirsanyahay ama taageersanyahay mucaaradka waxaa loo taxaabi jirey xabsiga. Walaalkey ayaa igula taliyey inaan isaga cararo Harar oo aan aado walaalkey ‘kale’ oo dagan magaalada Godey”
“Aabahay wuxuu ahaa mid aad ii jecel oo aan marnaba doonayn inaan kafogaado. Markii aan soo ambabaxaayey ayuu ila soo dardaarmay isagoo sii saadaalinaya waxa igu dhicidoona haddii aan baxo “Waxaan kabaqaya in lagu qabto oo macbuus lagaa dhigo,kadibna aad xabsiga ka soo baxdid anigoo ifka katagey oo aan sidaas isku wayno”
Rasasta iyo hubka faraha badan ee ay kusoo fureen gurigii aan ku jirey oo layga kala cararay awgeed ayaan lawareerey oo ay uqaateen inaan ladhadhacaya khamri daraadeed
“Waryaada nagadaaya xabada” Ayaan afsoomaali ku iri anigoo weliba xagooda usoo dhaqaaqey!
Maadama aan caruur ahey afsoomaalina kuhadlo wuxuu ii qaatey inaan Soomaali ahey.
“Waryaa bisanka qabso oo orad kugub buundada” ayuu igu yiri mar uu doonayey inuu ii gudbiyo dhanka Somalia!
Intanada afka Soomaaliga kuhadlaysay oo intooda badan ay Soomaali ahaayeen,dhowr jeer ayaa si qarsoodi ah naloo siidaayey, hadana dib ayaa naloo soo qabtay. Waxay aheyd xaalad dagaal, dadka amarka bixinaya war isuma hayaan.Qaarkood waxay noo haystaan macaabiis Ethiopian ah, meesha ay qaarkale doonayaan inay nabadbaadiyaan oo ay nagafogeeyaan goobta dagaalka”
Wuxuu sidoo kale ii sheegey inay jireen dad Muslimiin ah oo xabsiga kula jirey laakinse asalkooda ahaa askar ama militia ubadan reer Harar iyo qoymiyaadkale oo lasoo qabtey ayagoo dagaalamaya ama hubaysan. “Sida ay ubadnaayeen ayagaa isa soo dhiibey waayo askarinimada waa lagu soo qasbey ee diyaar uma aheyn inay dagaalamaan”
Walaalyaal inta kadhiman sheekada anigoo idin soo gudbin doona ,inta aan dib dambe ukulmayno waa walaalkiin Adam Abdi Abuzuhri oo idinleh Wassalaamu Calaykum Warahmatullaah. Wixi talo iyo tusaale ah waxaad kusoo adinkartaan,
abuzuhri1@gmail.com rayigiinana waa muhiim